FIATREHANA NY FAHAVARATRA : Efa mivonona amin’ny fiakaran’ny rano ny faritra iva – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:37
Isan’ny mampihena ny tondra-drano ny fanadiovana tatatra.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/FIATREHANA NY FAHAVARATRA : Efa mivonona amin’ny fiakaran’ny rano ny faritra iva
Ao anatin’ny fotoam-pahavaratra isika ary efa nanomboka nisy ny orana teto an-drenivohitra. Efa nivonona amin’ny fiakaran’ny rano sy ny hisian’ny tondra-drano ny eny amin’ny faritra iva itrangana tondra-drano matetika, toy ny eny amin’ny faritra Besarety, Mahavoky, Andravoahangy, hatrany Masay... Nisy ny fanadiovana lakandrano sy tatatra ivarinan’ny rano iarahana amin’ny Samva sy ny kaominina Antananarivo renivohitra. Fanadihadiana…
Rado Harivelo 10 décembre 2020
Toerana itrangana tondra-drano isan-taona ny faritra iva eto an-drenivohitra. Isan’izany ny eny Ampandrana, Besarety, Avaradoha, Mahavoky, Andravoahangy, Mandilaza, Ambodivona, mipaka hatrany Masay iny. Tsy misy tsy mikaikaika rehefa fotoam-pahavaratra. Raha ny fanadihadiana natao, efa mivonona amin’ny fiakaran’ny rano ny eny amin’iny faritra iny, toy ny eny Besarety, Mahavoky, Andravoahangy. Nambaran-dRasahivelo Andriatompoina mponina eny amin’ny faritra Mahavoky iny fa « efa misy ny Himo na asa tana-maro fanadiovana ny tatatra, eny an-toerana, efa ho roa andro izay. Manodidina eo amin’ny zato eo no manatontosa izany, ialana amin’ny mety fiakaran’ny rano ». Nasongadiny fa mamaha ny olana amin’ny fiakaran’ny rano tokoa ny fandavahana ireo tatatra mandalo any ampovoan-tanàna, saingy ny mampalahelo, ireo fako avy nalana tao, mijanona eo amin’ny sisiny ary tsy misy mandroaka. Vokany, rehefa avy tokoa ny orana, dia miverina ao anaty tatatra ihany izany. Tokony hisy, araka izany, ny fanaraha-maso hentitra amin’ny fanaovana ity asa tana-maro ity, mba tsy hahatonga ho aim-bery maina ny ezaka fanadiovana tatatra. Lasa ifanilihana mantsy ny fandraofana io fako io, izay lazain’ireo mpanao asa tana-maro fa andraikitry ny Samva ny maka izany.
Nambaran’i Lôlôt mponina eo Besarety, fa mandeha ny asa fanadiovana ny lakandrano eny an-toerana. « Efa mampihena ny tondra-drano ety ny fanaovana asa tana-maro amin’ny fanadiovana, saingy hita fa ny fotodrafitrasa andehanan’ny rano mihitsy no tsy maharaka. Manampy trotraka ireo olona mbola minia manary fako any anaty tatatra », hoy izy nanazava. Samy nanasongadina ny andraikitra tokony horaisin’ny Kaominina Antananarivo renivohitra, ny amin’ny asa fanentanana sy fanaraha-maso sy firosoana amin’ny fanasaziana mihitsy aza izy ireo, manoloana ireo mponina manary fako any anaty tatatra.
Dibo-drano tahaka izao hatrany ny faritra iva rehefa fahavaratra.
Tiana ny manamarika fa efa mandeha ny asa fanadiovana ny tanàna sy ireo lakandrano, ary ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa simba, mba hisorohana ny fiakaran’ny rano amin’ny fotoan’ny orana eto Antananarivo, efa ho roa volana izay. Izany dia iarahan’ny Kaominina Antananarivo renivohitra miasa amin’ny AFD, ao anatin’ilay tetikasa PIAA « Programme Intégré d’Assainissement de la Ville d’Antananarivo ». Efa nisy mihitsy aza, ny fidinana ifotony nijeren’ny Ben’ny Tanànan’Antananrivo ny fandrosoan’ny asa sy ny zava-misy.
Isan’izany ny tao amin’ny Fokontany Ankadimbahoaka, Anatihazo Isotry, Andrefan’ Ambohijanahary, Ankazomanga, Bekiraro. Anisan’ny tena manentsina ireo lakandrano ny tavoahangy plastika sy ireo « sachets ». Noho izany, ankoatr’ireo fepetra raisin’ny Kaominina, adidintsika tsirairay ny mifanabe, mba hisoroka tsy iverenan’izany intsony.
Rivo-mahery nanimba fotodrafitrasa
Ny afakomaly, 7 desambra lasa teo, tamin’ny 1 ora ka hatramin’ny 1 ora sasany antoandro, tao amin’ny renivohitry ny distrikan’Ambatolampy, nisy rivo-mahery nandalo narahina ora-mikija, rehefa nijanona ny ora-mikija, nanao fisafoana ny Zandary nijery ifotony ka nanao tatitra fa sekoly miisa telo no lasan’ny rivotra ny tafony : sekoly tsy miankina Marthe Hervée sy EPP Ambodiriana ary Andafiatsimo. Teo koa ny tsatoka Jirama nianjera tao Ambanimaso, Mahafeno – Ambodiriana ary Bemasoandro, izay samy ao anatin’ny Kaominina renivohitra Ambatolampy avokoa. Tsy nisy ny aina nafoy na koa naratra.Fepetra noraisina, nentanina ny vahoaka hanisy fasika amin’ny kitapo ny tafon-tranony. Nampandrenesina ny sefon’ny farim-piadidiana ny fampianarana, ny lehiben’ny orinasa Jirama ary ny lebiben’ny Distrika tao an-toerana.